February 7, 2021 Dai 4, 2022 0
Kubva pakatanga AMD yechikamu chayo chitsva cheZen 3 chevashandisi ve desktop, kuitiswa kwemabhuku ekunyorera uye vashandisi venhare zvakamirirwa nemoyo wese. Mune chizvarwa chimwe chete, pane imwecheteyo nzira yekugadzira, AMD yakaburitsa + 19% mamwe mashandiro paawa imwe (isu takaongorora), saka kune chero sisitimu ine simba shoma, kumwe kuita kunowanzo gamuchirwa kwazvo. AMD yakazivisa yayo nyowani Ryzen 5000 Mobile processor mhuri pakutanga kwegore, iine processor kubva 15W kusvika 45W + mupombi, uye yekutanga masystem maseru anouya kuzotengesa muna Kukadzi. AMD yakatitumira muenzaniso wepamusoro weRenzen 5000 Mobile yekudzokorora kwanhasi, iyo 35W Ryzen 9 5980HS, sezviri muASUS ROG Kuyerera X13.
Ryzen 5000 Nhare: Eight Zen 3 cores uye Vega 8 Graphics
Kune avo vasina kubata chiziviso chepakutanga mavhiki mashoma apfuura, heino kudzokororwa kweiyo Ryzen 5000 Mobile mhuri pamwe neakakosha mapoinzi kubva kuchiziviso.
Iyo Ryzen 5000 Mobile processor processor ndeye kusimudzira pamusoro pegore rapfuura Ryzen 4000 Mobile processor akateedzana. AMD yakabatana-yakagadzirirwa mbiri idzi dzemhuri dzeprosesa kushandisa zvakare akakosha zvikamu zveiyo chip dhizaini, zvichigonesa inokurumidza nguva-kuenda-kumusika uye inokurumidza kusimudzira kutenderera kweve AMD's notibhuku rekugadzira vadyidzani (maOEMs), saDell, HP, Lenovo, nevamwe . Musiyano mukuru uripo pakati pemapurosesa maviri achasangana nevashandisi vazhinji ndeyekuti iyo nyowani Hardware inoshandisa sere eanhasi emamiriyoni e AMD emhando dzeZen 3 CPU, inova kusimudzira pamusoro peasere Zen 2 cores kubva gore rapfuura. Iyo inosimbisa ndeye + 19% mbishi kuita kusimudzira kana uchienzanisa iwo maviri panguva imwecheteyo frequency.
Pasi pehood, pane mamwe mashoma kiyi shanduko ayo vanofarira vanozofarira. Iyo nyowani 8-musimboti Zen 3 dhizaini inogovera yakasanganiswa 16 MB L3 cache, iyo inogonesa chero eiri macores ekuwana cache yakazara, ichideredza latency kusvika main memory (kubva pa4 MB kusvika pa16 MB) zvichienzaniswa neyekutanga dhizaini yaive nemasumbu maviri emana eZen 2 cores, imwe neimwe iine 4 MB ye cache.
Iyo processor nyowani ndeye 180 mm2 muhukuru, ichienzaniswa ne156 mm2 yechizvarwa chekupedzisira, asi ichiri kukwirana mune imwechete socket. Ine 10.7 bhiriyoni transistors, ayo ari kumusoro kubva ku9.8 bhiriyoni. Izvi zvinoreva kuderera kunoshanda kweiyo transistor density, kunyangwe isu tichiziva kuti Zen 3 cores idiki diki pane Zen 2 cores, uye mamwe matanho ekuchengetedza akawedzerwa (zvimwe pane izvi pane rinotevera peji).
AMD CEO Dr. Lisa Su Showcasing Ryzen 5000 Nhare kuCES
Vashandisi vanogona kutsamwiswa nekuti iyo processor nyowani inongoratidzira chete Vega 8 mifananidzo, yakafanana neyeyakagadzirwa gore rapfuura, zvisinei chikamu chesilic-re-use inouya muno ichigonesa AMD kuti iuye kuzotengesa nenzira yakakodzera. Iyo Vega 8 dhizaini muchizvarwa chakapfuura yanga iine hukuru hukuru mukushanda uye kuwanda, uye panguva ino kutenderera tinowana imwe + 350 MHz pakakwirira-kumagumo. Vashandisi vanoda kuona RDNA mufoni processor vanogona kumirira kwenguva yakareba. AMD's yekushandisa zvekare zano inogona kuzvikweretesa kuchinja CPU chimwe chizvarwa, GPU chinotevera - isu tinofanirwa kumirira kuti tione.
Kune dzimwe shanduko dzeSoC, dzatichazosvika kwadziri mune ino ongororo.
Iyo Ryzen 5000 Mhuri inokamurwa yakakamurwa kuita maviri akapamhama chigadzirwa maseru, asi ese ari maviri mitsara anoshandisa imwecheteyo iri pasi yesilicon. Pamusoro pane echinyakare 45 W H-akateedzana processor, yakanangana nekugadzira zvinyorwa zvinyorwa. Kwechizvarwa chino, AMD iri kubatanidza echinyakare 45 W mativi ane huwandu hwe35 W 'HS' mamodheru, akagadziridzwa kune mamwe mashandiro ekugadzira - ichi chichava chizvarwa chechipiri che AMD chevadzidzi vekirasi makumi matatu nemashanu yeW W. AMD iri kuunzawo nyowani nyowani ye 'HX' mapurosesa pa35 W uye pamusoro izvo zvinobvumidza vanobatirana ne AMD kuti vabatanidze -kugadzira -kuita-kuita uye / kana kuwedzeredza edhizhibhuku re AMD mhinduro.
AMD Ryzen 5000 Nhare: H-Series
Ryzen 9 5980HX 8C / 16T 3300 4800 8 2100 45W + Zen3
Ryzen 9 5900HX 8C / 16T 3300 4600 8 2100 45W + Zen3
Pakaunzwa HS gore rapfuura neRyzen 4000 Mobile, yaive AMD-OEM kudyidzana-chete-yakagadzirwa chigadzirwa chaida kubvumidzwa ne AMD kuitira kuti uwane mukana kwavari. Gore rino zvakadaro, vanoita kunge vari chikamu chezere rakazara, zvichiratidza kuti pamwe kudiwa kweaya madhizaini eHS kwaive kwakakwira kupfuura zvaitarisirwa.
Iwo matsva eHX modhi ari pano kuti agonese epamusoro-magumo emitambo, nzvimbo yekushandira, uye desktop-inotsiviwa masisitimu, pamwe nekugonesa vatengesi kuti vape overclockable laptops mumusika nekutonhodza kwakakwana kwakapihwa. Overclockable laptops haisi pfungwa itsva (Intel yanga ichizviita kwenguva yakati), asi zvinoita sekunge vanobatana ne AMD vakakumbira masimba epamusoro kuitira kuti musika uyu ugone ku AMD. Iyo yepamutemo TDP yema processors aya ndeye 45+ W, inoratidza kuti vanobatana vanogona kugadzirisa yakatsiga TDP tsika kuchamhembe kwe45 W kana zvichidikanwa, ingangoita 65 W sezvinodiwa. Munguva yakapfuura, kana maOEM aida kudzika nenzira iyi, vaizoda kuvaka chassis inotakurika inokwanisa kutsigira desktop processor.
Pane kumwe kutsauka kudiki kubva kune yakajairwa H-yakatevedzana, mukuti hapana Ryzen 9 yakajairika 'H' processor. Iyo Ryzen 7 5800H ichagara pamusoro pemusika iwoyo, asi mashandisiro anoita masystem aya ekuverenga zvinoreva kuti Ryzen 7 ichine macores masere akazara uye anokurumidza kusanganiswa magirafu. Muchiitiko ichocho, Ryzen 9, ine chete HS neHX modhi, zvine nharo kune mamwe 'nyanzvi' yakatarisana nemagadzirirwo.
AMD iri kushambadza iyo Ryzen 9 5980HS seyakanakisa processor yeinotakurika mutambo wemitambo, nepo Ryzen 9 5980HX iri 'yakanakisa nhare processor yemitambo'. Sechikamu chezvishandiso zvezuva rekutanga, AMD inoratidza iyo Ryzen 9 5980HS seyakarova mazana matanhatu pts muCinebench R600, yaizoiisa padanho rakafanana rekuita se AMD's desktop-kirasi Zen 20 processors. Hatina kunyatso kuhwina mazana matanhatu muongororo iyi neR3 600HS (takawana 9).
Iwo echinyakare 15 W processors, anoshandiswa kune ekupedzisira-akatetepa uye akareruka anotakurika zvinyorwa, anoumba chikamu cheRyzen 5000 Mobile U-series. AMD iri kugonesa akati wandei ezvikamu neakagadziridzwa Zen 3 cores, asi zvakare kuunza akati wandei ma processor anoenderana neiyo yekare Zen 2 dhizaini, kunyangwe ine zvigadziriso.
AMD Ryzen 5000 Nhare: U-Series
Nzira iri nyore yekuziva izvi ndeye digit mushure menhamba 5. Kunyange manhamba (5800, 5600, 5400) anobva paZen 3, nepo odd manhamba (5700, 5500, 5300) ari iwo mavhezheni akagadziridzwa eZen 2. Zvakawanda. yevashandisi vanozotarisa aya ekupedzisira processors akafanana nechizvarwa chakapfuura, zvisinei isu takadzidza kuti kune akati wandei misiyano yakakosha yatichavhara mune yakaparadzana chinyorwa.
Zvakangodaro, AMD iri kusimudzira yepamusoro Ryzen 7 5800U sekambani inoshanda zvakanyanya mbozha processor kusvika parizvino. Kubva pane akati wandei ekuwedzera kune silicon dhizaini, AMD iri kudaira + 2hr hupenyu hwebhatiri kubva kune yakapusa processor swap kubva kuRyzen 4000 kuenda kuRyzen 5000, kunyangwe zvese zvimwe zviri muchassis zvakafanana. Zvakangodaro, AMD iri kutaura kuti yakashanda nemakambani anodzora, vatengesi vemagetsi, uye vagadziri vemabhuku kuitira kuona kuti iwo maOEM anoda kuvaka masisitimu ane anopfuura makumi maviri + maawa ehupenyu hwebhatiri ane maturusi ekuita kudaro. Mamwe maOEM zvisinei, kunyanya emadhizaini emutengo wakaderera kana zvimwe mhando dzedzidzo, anogona kushandura zvakasununguka processor kubva kune yekare kuenda kutsva ine chete firmware update, sezvo zvese Ryzen 20 uye Ryzen 4000 inoenderana pini.
Yakazara AMD irikuda dhizaini zana nemakumi mashanu+ neRyzen 150 Mobile kusvika pari zvino, nhanho yakakosha kubva kune zana madhizaini paRyzen 5000 Mobile. Izvi zvakagadzirirwa kuti zvibatanidze epamusoro-yekupedzisira emitambo madhizaini neazvino premium giraidhi makadhi, musika uyo AMD yave nedambudziko rekupaza kusvika parizvino.
AMD Generation Code Mazita
AnandTech muchiso moyo Graphics urongwa
Mobile Ma processor
Dalí Athelon 3000 2 x Zen Vega 3 GF 14nm
Desktop Ma processor
kuGenoa '4th Gen' Zen 4 - ?
Roma EPYC 7002 64 x Zen 2 - TSMC N7
Heino tafura inoshanda ye processor codenames yatingashandise munzvimbo dzakasiyana dzekuongorora uku. Aya anoreva AMD's emukati macodenames eiyo silicon dhizaini, uye ita senzira iri nyore yekutaura nezve Hardware pasina kugara uchitaura nezveiyo branding (kunyanya kana imwe silicon ichishandiswa mumhando dzakawanda dzechigadzirwa).
Kuedza Zvikumbiro zve AMD: The Notebook
Kune iyi wongororo, AMD yakapa iyo Ryzen 9 5980HS mukati me ASUS ROG Flow X13 laptop. Ndiyo imwe yeaMD's kiyi dhizaini inohwina, ine 35 W-giredhi processor mune yakapfava dhizaini yakanangana nekufamba. Semuongorori uyo mugore rakajairwa anoshandisa nguva yakawanda achifamba, zvakatemwa zviri pabhokisi zvinopa pfungwa yakawanda kune yangu yenguva dzose kufamba kwebasa.
Iyo sisitimu inoratidzira 13.4-inch 360º hinged kuratidza, iyo seIPS touchscreen ine 3840 × 2400 resolution (16:10, pakupedzisira) inomhanya pa120 Hz ine adaptive sync, Pantone color certified, uye yakavharwa muCorning Gorilla Girazi. Chiratidziro chakapihwa 116% sRGB, 86% Adobe, uye 85% DCI-P3.
Pasi pehodhi iyi AMD Ryzen 9 5980HS processor, ine sere Zen 3 cores netambo gumi nenhanhatu, ine 3.0 GHz base frequency uye 4.8 GHz single core turbo frequency, yakarongwa pa35 W. ASUS inoti vanotenga mhando dzemhando yepamusoro dze 5980HS yeFlow X13 kuve nechokwadi chekuita kwakanyanya uye hupenyu hwebhatiri. Iyi processor ine Vega 8 mifananidzo, zvisinei ASUS yakaibatanidza neGTX 1650 4 GB discrete graphics processor, ichigonesa CUDA kukwidziridzwa pamwe nepamusoro pekuita mutambo pazvinenge zvichidikanwa.
Yedu unit inouya ne32 GB yeLPDDR4X-4267 memory, pamwe neWestern Digital SN350 1TB PCIe 3.0 x4 NVMe yekuchengetedza drive. Ose ari maviri aya aizoita kunge akajairwa kuisirwa Flow X13.
ASUS inoti bhatiri re62 Wh rakanaka kwemaawa gumi nemasere ekushandiswa, uye Flow X18 ndeimwe yezvitsama zvishoma zvinotsigira 13 W USB Type-C magetsi. ASUS inoti iyo mabundle charger inogona kuchaja iyo unit kubva pa100% kusvika 0% mukati memaminitsi makumi matatu nemapfumbamwe.
Zvimwe zvinhu zvinosanganisira kiyibhodhi ine back-lit ine makiyi emuseve akaenzana, yakakura-yakazara HDMI kubuda pamwe ne USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A port, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C ports. , jack 3.5 mm, uye yakajairwa PCIe 3.0 x8 inobuda yekubatanidza yekushandisa nayo ASUS 'XG Nharembozha yekunze mifananidzo dock. Iyi dhizaini dhizaini inogona kuuya neyakagadzirwa RTX 3070/3080, uye pamwe nesimba remifananidzo rinopawo sisitimu nemamwe mana USB Type-A ports, HDMI/DP zvabuda, uye Ethernet. Neiyi doko yakaiswa, tekinoroji system yacho yaizove nemakadhi matatu emifananidzo.
Zvese izvi zvinouya pa2.87 lbs / 1.30 Kg, zvese zviri pasi pe16mm gobvu. Ichi chinowanzove chikamu chakakosha kune ese AMD neIntel kana zvasvika pakufamba kwakasanganiswa nekubudirira. ASUS haisati yazivisa mitengo yeROG Flow X13 parizvino - imwe modhi iri mumhando yakavakirwa paRyzen 9 5900 HS, asi yakafanana.
Ongororo iyi ichanyanya kuve nezve processor kwete iyo Flow X13, nekuda kwekunetsekana kwenguva (sample yedu yakasvika mazuva mashoma apfuura). Nekudaro, zvakakosha kucherechedza kuti sezvizhinji zvemabhuku ekunyorera, iyo ROG Flow X13 inouya neakawanda simba uye maitiro ekuita.
Muchokwadi, kune maviri: Kunyarara uye Kuita. Mune imwe neimwe modhi mune akasiyana siyana ekupisa kusingaite, kuitira kuchengetedza chero ruzha rwunonzwika rwakadzika, uyezve akasiyana kukosha kwesimba / mathermals e turbo uye dhizaini yemagetsi.
Izvi zviviri zvinosiyana zvakanyanya mukudhirowa kwesimba kwakasimba uye miganhu yekupisa:
ASUS ROG Flow X13 Simba Sarudzo
Silent 70ºC 65 W 42 W 85ºC 6 chik 15 W @ 68ºC
mutambo 65ºC 65 W 42 W 85ºC 120 chik 35 W @ 75ºC
* Tembiricha yekusaita pano yakakwira zvakanyanya, sezvauchaona gare gare muongororo, nekuti AMD's high-frequency levers ine hukasha zvekuti maturusi edu ekutarisa sensor ari kumisa ma frequency modes, kunyangwe mutoro mudiki.
Kuedza Zvikumbiro zve AMD: Iyo Ryzen 9 5980HS
Zvakafanana nekutangwa kweRyzen 4000 Mobile, iyo unit AMD yatipa ndiyo yavo yepamusoro yemutsetse asi inonyanya kushanda H-series processor. Kwechizvarwa chekupedzisira yaive Ryzen 9 4900HS inowanikwa muASUS ROG Zephyrus G14. Iyo Zephyrus G14 yakakura zvishoma pane ROG Flow X14 yatinayo nhasi, asi iyo GPU iri nani paG14 (2060 vs 1650). Mapurosesa ese ari maviri akayerwa pa35 W, uye ese ari maviri anoratidza mamwe emhando yepamusoro dhizaini AMD inoda kutungamira nayo pakutanga kwechizvarwa.
Makwikwi makuru ema processor aya Intel's Tiger Lake. Masvondo mashoma apfuura Intel yakazivisa mutsara wayo mutsva weH35 processors, uko ivo vanosimudzira iyo 15 W U-yakatevedzana processors kusvika ku35 W yekuwedzera kuita. Hatina shoko rekuti iwo mayunitsi achange ari pamusika rinhi (isu tinoudzwa munguva pfupi), zvisinei isu takwanisa kuchengetedza iyo MSI Prestige 14 Evo iyo ine Intel's best U-series processor (Core i7-1185G7) uye inobvumira kuita kwakasimba pa35 W.
mudziyo ASUS ROG Kuyerera X13 ASUS ROG Zephyrus G14 Intel Reference Dhizaini MSI Presige 14 Evo
chengetedzo WD SN350
Padivi penhamba idzi isu tinewo nhoroondo data kubva Intel's Tiger Lake reference chikuva iyo yaimhanya mu15 W uye 28 W modes.
Asi chekutanga, ngatikurukurei zvinhu zvitsva muRyzen 5000 Mobile.